Zonke onobuhle "Toyota" uhlu olufushane akunakwenzeka. Umlando we qembu iqala ezikude 1937, futhi cishe 80 iminyaka, wafika ukukhanyisa lenqwaba izimoto lokhu brand. Nokho, kulesi simo kubalulekile ukutshela okungenani walabo onobuhle, okuye sekwande kakhulu futhi, ikakhulukazi, umzuzile nokuqashelwa kwabo njengenhlangano esemthethweni phakathi amakhasimende ethu Russian.
Esikhathini Russian Federation, ethandwa kakhulu sedan Japanese iyona imodeli we-Toyota Camri. Futhi kuhle ngempela zonke izici imoto "Toyota". Zonke onobuhle ezikhiqizwa yilo ukukhathazeka, idume ngomtapo izinga kanye nokwethembeka, kodwa lokhu model ikakhulukazi abathandwa baseRussia. Akukhona nje kuphela ezikhangayo, kodwa futhi enamandla ngempela. Kunezindlela eziningana ongakhetha kuzona injini - 1.8-, 2.0-, 2.5- futhi 3.5-litre. 125, 148, 181 kanye 249 amahhashi ngokulandelana. Good "Camry" sesimweni esihle (b / a) angathengwa ruble ayizigidi 500-600. Nokho, kungase kube ukulandisa ezibizayo - abangaphezu kwesigidi, kodwa izindleko kuncike ngonyaka ukwakhiwa kanye umhlangano.
Ukukhuluma wonke amamodeli "Toyota" senziwe sedan, asikwazi bayakhohlwa umsubathi lo Trueno lweToyota, Corolla, Corona, Umqhele noMarku X. Lezi imishini futhi zithandwa phakathi abathengi Russian. Bonke ukwabelana ukubukeka ezinhle, kuyinto Ukucaciswa ngempela enamandla (abashayeli wethu afana imishini, lapho ungakwazi "uzizwe ijubane") futhi ngamanani ezifanele.
Crossovers, Suv - phakathi kwabo, futhi, abe yokubukisa kakhulu ngokuya ngokubukeka nezici imodeli "Toyota". Zonke SUV ezikhiqizwa yilo ukukhathazeka, kusho ukuthi kunokuthile ofana. Njengoba ungacabanga, lokhu elingaphakathi ivulekile, kufanelekile ekhululekile, umzimba oqinile, permeability ezinhle. Ngenxa lezi zinzuzo futhi zithandwa 'crossover', "Toyota" imodeli.
All SUV ekhiqizwa ngokuvumelana ukukhathazeka Yebo, akazange zithandwe eRussia, kodwa RAV4, "Land Cruiser", "Prado", FJ Cruiser, Toyota Sequoia kanye Rush - kungcono abaholi beqiniso. izixazululo Ezivelele elingaphakathi, izinjini ezinamandla - kuba esivela kubo. Ngokwesibonelo, izinjini ukukhwezwa ngaphansi hood "Land Cruiser", amandla okukhiphayo 309 "amahhashi"! Futhi "Abangamakhulu" ke ohlakaziwe ngoba 8,6 imizuzwana. Kuhle kakhulu i Suv. Yebo, futhi wonke-wheel uhlelo Idrayivu izindaba ezinhle: sibonga ukuphuma kwakhe imoto ingase okubizwa "ngawakhamela out amandla aphelele."
Zonke onobuhle "Toyota" inguqulo ezemidlalo - kuyinto izimoto ezikhethekile. Esinye sezibonelo yesiteleka kakhulu yilona imoto Toyota Supra. ukukhiqizwa yayo yaphela ngo-2002. Lesi sakamuva baba kwesizukulwane sesine. Lezi imishini kuhluke chassis JZZ30 Soarer futhi asemkhathini 225-amahhashi injini. IYurophu yakhiqiza inguqulo nge 280 hp Kodwa enamandla kakhulu imoto ukuguqulwa sasibhekwa njengophawu lokuthi American. Ngaphansi hood walo wawenziwe iyunithi 330-eqinile. Kodwa zonke izinjini nokwethenjelwa esiphezulu. Ziyakwazi kulula silungisa futhi ihlale isikhathi eside, ngisho ngesikhathi ukusetshenziswa ezinzima. Ehlanganisiwe ngokuvamile 4-band "okuzenzakalelayo", kodwa kwakukhona 5-ngesivinini transmission ibhukwana.
Uma kwenziwe uhlu lwazo zonke amamodeli we "Toyota" ngohlamvu sporty, asikwazi bayakhohlwa imoto kanye Toyota Celica. Ayevelele omzimba umbukwane nge ngalé eqinile futhi uma magic "iso" Izibani zangaphambili. Ukucaciswa komkhiqizo futhi lihlaba umxhwele. Ngaphezu izinjini ezinamandla, eliphezulu ukumiswa nokusingatha kakhulu, le mishini abe imishini ocebile. Washa imicamelo, foglights, Wiper misa, air conditioning, isondo adjustable ayo, Servo ingilazi, cruise control, CD-player, sunroof, ABS, atikrylo ezingemuva ... bebonke, konke okudingayo, ngisho abaningi babe ku le mishini.
Nokho, kusukela imikhiqizo emisha - kungcono Toyota GT 86. 2012 Year! ERussia, lezi onobuhle babe amayunithi 19 itholakale ukudayiselwa. Futhi ngaleso sikhathi, ngo-2012, imoto ngayinye abiza ruble ezingaphezu kwengxenye yesigidi.
Libuye imishini zithandwa kakhulu. "Toyota", zonke imodeli akunakwenzeka ukuba uhlu, ukhiphe izimoto abaningana emlandweni walo. Ethandwa kakhulu iyona Toyota Prius +. Ivulekile, ukhululekile, nge umthwalo gumbi elikhulu. Ideal for kude inkampani enkulu!
Toyota Verso - omunye evenini lesi sikhulu ngolaka. Kuyinto icwecwe kakhulu (ubude - esingaphansi 4 amamitha), kodwa elingaphakathi evulekile kakhulu. Kube ihlanganise kalula abantu abahlanu. Ngaphezu kwalokho, lo mshini iyona ukonga kakhulu. Emjikelezweni kuhlanganiswe ibusa amalitha 4.5 kuphela diesel.
Toyota Alphard - kuba evenini premium. ku 7 no-8 abagibeli - Kukhona izinketho ezimbili kukhona. Futhi le mishini akuzona ingaphakathi nje evulekile. Basaba ubukhulu Amazing isiqu. 1900 amalitha. Lena akuyona yini ukuhamba - kuphi ungahambisa!
On le mishini, singathanda ukuthi ekugcineni. Adume kakhulu "Toyota" umuntu enemisebenzi ngesiRashiya - umfuziselo eyaziwa ngokuthi i-Avensis. Kuyinto ezikhangayo futhi pretty. Ngaphezu kwalokho, "Avensis" wathola izinkanyezi ezinhlanu nge Euro NCAP ngokuphepha kwabahamba ngezinyawo. Auris - zenqola efanayo, nakuba kubhekwa "imoto encane nomndeni". I esasinedumela elibi, "Corolla" ngenhlanhla nayo kukhiqizwa emzimbeni.
Ngokuvamile, inkampani Japanese isungule futhi ekhiqizwa eningi onobuhle ezahlukene. Coupes, sedans, esiteshini izinqola, amancane, SUV - zazo kukhona abaningi kakhulu. Futhi iningi lazo zithandwa eRussia. Futhi lokhu kubalulekile, ngoba leli qiniso ikhombisa izinga okusezingeni yalezi zimoto futhi bakwazi ukuthenga ngokuphepha ngaphandle kokwesaba zokugwema ukuphuka.